Soo dejisan MySQL 8.0.19 – Vessoft
WindowsHorumarinKobcinta dadka kaleMySQL
Qeybta: Kobcinta dadka kale
Bogga rasmiga ah: MySQL
MySQL – nidaam loo jecel yahay in la abuuro oo la maareeyo database-ka. Software ayaa leh xawaare sare arrinsashada database-yo iyo yaraynaysaa kharashka awood-siinta nidaamka ama maamulka database. Isticmaalka server gudaha user uu awood u leeyahay in ay ku daraan MySQL in softwares standalone. Software ayaa sidoo kale taageertaa noocyo badan oo ka mid ah miisaska in ay bixiyaan text-buuxa goobidda iyo macaamil ganacsi ee heerka shakhsiga.
Xawaaraha sare ee ka arrinsashada database-ka
Taageerada noocyada kala duwan ee miisaska
Soo dejisan MySQL
Faallo ku saabsan MySQL
MySQL Xirfadaha la xiriira
AutoIt – waa qalab loogu talagalay waxqabadka otomatiga ah ee ficilada had iyo jeer soo noqnoqda ee nidaamka hawlgalka. Softiweerku wuxuu taageeraa shaqooyinka si loo furo, loo habeeyo loona diyaariyo qoraalada.
Nidaamka awood leh ka ah maamul database. Software wuxuu taageeraa noocyada kala duwan ee xogta iyo waxa ka mid ah qalab gaar ah jiilka la nidaamka SQL-code.
Inno Setup – waa aalad loo abuuro rakibaalka faylalka iyadoo la kaashanayo heerar kala duwan. Sidookale, waxay qeexaysaa dhamaan waxa galinta kujira feylasha diiwaan galinta nidaamka iyo bilaabida.
Android Studio – jawi horumarineed oo isku dhafan oo leh dhamaan astaamaha lagama maarmaanka u ah kobcinta iyo ku xadgudubka codsiyada Android.
Calan biilasha waxtar leh in la abuuro server a web buuxda. Software ka kooban module ka mid ah xisaab faahfaahsan booqashada tirakoobka ee Webalizer iyo FTP-macmiilka FileZilla.
Cayaaraha ’BlueStacks App Player’ – oo ah barnaamijka barnaamijka hawlgalka ee Android. Softiweerku wuxuu xaqiijinayaa dib u soo kabashada tayada sare ee barnaamijyada Android iyo barnaamijyada.
AOMEI PE Builder – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu abuuro bootable media ama muuqaal CD ah oo ku saleysan Windows PE iyada oo aan la rakibin WAIK iyo awooda lagu dari karo feylashaada.